Homeसमाचारयी हुन् बिश्व कै ख’तरनाक कुकुरहरु, जसले सुघेरै सजिलै पत्ता लगाउन सक्छन अ’परा’धी (भिडियो सहित)
March 22, 2021 admin समाचार 3110
कुकुरलाई मानिसको साथी समे’त भनिन्छ। कुकुर मानिसको साथी मात्र नभएर रक्ष’क पनि हो। घरको सुरक्षादेखि अ’परा’धी पत्ता लगाउने कामसमेत कुकुरको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले कुकुरको मह’त्त्व विशेष छ। विश्वभरका प्रहरीले अ’पराध अनुसन्धानमा कुकुरको सह’योग लिँदै आएका छन्।
कतिपय अवस्था’मा अनुसन्धान अधिकृतहरूले पत्ता लगाउन नसकेका अ’प’राधी कुकुरको सहयोगमा पत्ता लागेका छन्। नेपाल प्रहरीले पनि कुकुरलाई अनुसन्धानमा प्र’योग गर्दै आएका छन्। कतिपय घट’नामा मान्छेले पत्ता लगाएका अ’प’रा’धीमा आशंका गर्ने गरे पनि कुकुरले पत्ता लगाएका अ’प’रा’धी सही हुन् भन्ने विश्वास गर्न थालिएको छ। यो कुकुरमा भएको अ’द्भुत क्षमताका का’रण नै हो।
विश्वभर लगभग २०० प्रजा’तिका कुकुर छन्। प्रजातिअनुसार कुकुरको फरकफरक वि’शेषता हुने गर्छ। कुकुरमा वातावरणमा हुने सानो’तिनो हल&चल पनि थाहा पाउने सक्ने क्षम’ता हुन्छ। कुकुरले निकट भविष्यमा कुनै ठूलो दु’र्घटना वा प्राकृतिक प्र’कोप आउन लाग्यो भने सूचना प्रवाह गर्न रोएर वा अन्य क्रियाकलापबाट चे’ता’व’नी दिने आम बुझाइ रहेको पाइन्छ। त्यसैले कुकुरले रोए वा असा’मान्य व्यवहार देखाए कुनै नराम्रो घट’ना हुने कि भन्ने मा’न्यता नेपाली समाजमा छ।
यस्ता विशेषता भएकाले पनि अ’प’राध अनुसन्धानमा प्रहरीले कुकुरको सह’योग लिन गर्छन्। नेपालमा पनि अ’प’रा’ध अनुसन्धान र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा कुकुरको प्रयोग ग’रिँदै आइएको छ। नेपाल प्रहरीले ठूलठूला अ’प’राधको अनुसन्धानमा कुकुरको प्रयोगले सफल’ता पाउँदै आएका छन्।
अ’प’रा’ध अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीसँग पो’लिग्राफ मेसिन, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, डिएनए प्रो’फाइलिङ युनिट, अटोमेटिक फिंगर प्रिन्ट, आइडेन्टिफिकेसन सिस्टमजस्ता आधुनिक प्रवि’धि रहेको छ। यसबाहेक अ’प’राध अनुसन्धानको अर्को भरपर्दो माध्य’म तालिम प्राप्त कुकु’रलाई लिइन्छ। त्यस्तै यहाँ कुरा गरिएको छ बिस्व’कै १५ ख’त’रनाक सैन्य कु’कुरहरु को बारेमा – इताजा खबरबाट
June 10, 2021 admin समाचार 2067
December 3, 2020 admin समाचार 5433
June 5, 2021 admin समाचार 2043
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (215850)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (207635)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (207291)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (206160)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (204975)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (204181)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (202443)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (202311)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (194167)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (171385)